ANTEMIERAM-PIRENENA : Depiote teo aloha miisa 50 no ho tafaverina raha tsy miova tamin’ny voka-pifidianana
Raha tsy miova tamin’ny voka-pifidianana vonjimaika feno izay navoakan’ny vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana ny vokatra ofisialy avoakan’ny Hcc dia ny 50 tamin’ireo solombavambahoaka teo aloha no ho tafaverina eny amin’ny antenimieram-pirenena Tsimbazaza. 18 juin 2019
Ho an’ireo boriborintany eto Antananarivo renivohitra manokana dia saika tafaverina avokoa ireo kandidà miara-dia amin’ny fitondrana. Tao anatin’ny vondrona politika Mapar izy ireo tamin’ny taona 2013 ary natolotry ny vovonana Ird kosa tamin’ny fifidianana 27 mey 2019 farany teo isan’izany, ohatra, i Lato Rakotomanga avy amin’ny boriborintany faharoa, i Anyah avy amin’ny boriborintany fahatelo, i Rossy avy amin’ny boriborintany fahaefatra.
Ny 121 tamin’ireo efa solombavambahoaka teo aloha no niverina nilatsaka tamin’iny fifidianana iny saingy izy 50 ihany no lanim-bahoaka, raha ny vokatra vonjimaika avy amin’ny Céni. Ankoatr’izay dia maro tamin’ireo olona efa tsisy vina amin’ny maro tamin’ny andraikitra ambony nosahaniny teto amin’ny firenena ihany koa no nitarika vonjimaika. Isan’izany ny minisitry ny varotra teo aloha Chabanu Nourdine, ny fampianarana ambony teo aloha Rasoazananera Marie Monique, ny minisitra teo aloha Fienena Richard.
Mahakasika ireo kandidà manana raharaham-pitsarana kosa indray dia fito ny isan’izy ireo ka ny roa tamin’ireo no fantatra fa mitarika vonjimaika. Marihana fa ho an’ireo kandidà na ny mpanohana azy nahita tsy fahatomombanana tamin’iny vokatra vonjimaika navoakan’ny Céni iny dia 48 ora taorian’ny namoahan’ny Céni no ahafahan’izy ireo mametraka fitoriana. Afaka 15 andro eo kosa no hiandrasana ny famoahan’ny Fitsarana avo momba ny Lalàmpanorenana ny vokatra ofisialy.